रमेश र नन्दाको बिबाह चलिरहँदा कल्पनाको मण्डपमा भएको इन्ट्रीले माहोल तात्यो ! – AB Sansar
December 8, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on रमेश र नन्दाको बिबाह चलिरहँदा कल्पनाको मण्डपमा भएको इन्ट्रीले माहोल तात्यो !
प्रखर वक्ता तथा गायक रमेश प्रसाई र नन्दा सिंह आज विवाह वन्धनमा बाँधिने भएका छन। कालीकोटकी नन्दा सिंहसँग र धरानका रमेश प्रसाईं लगनगाँठो कस्ने भएका छन । उनीहरु दुवै दृष्टिविहिन हुन् । आज सोमबार का दिन दुवै को विवाह भब्य हुनेभएको छ । आज बिहेकै दिन भनेर नन्दा पनि भरिभराउ भएर सजिएकी छिन ।नन्दा भने समाजसेवामा छिन् । उनले काठमाडौंमा बालआश्रम चलाइरहेकी छन् । नन्दा र रमेशविच ३ बर्षदेखि गहिरो प्रेम सम्बन्ध रहेको छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
३ बर्ष अगाडि नन्दालाई रमेशले प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए । ३ बर्ष अगाडि इन्द्रेणी कार्यक्रममा भेट भएपछि उनीहरु नजिक भएका थिए । रमेशले बिबाहको प्रस्ताव राखेका थिए । नन्दा र रमेशको बिहे धरानबाट हुने वुझिएको छ ।अबल वक्तृत्व क्षमताका कारण फलोअर्स कमाएका रमेशलाई पछिल्लो समय ‘रिंकेबुङको राँगो’ बोलको गीतले चर्चामा ल्याएको छ । उनी पछिल्लो समय इन्द्रेणीमा समेत आवद्ध छन् ।कल्पना दाहाल मण्डपमा पुगेर रमेश र नन्दा संग फोटो खिच्दै गर्दा माहोल अर्कै बनेको थियो ।
‘जान मन थियो हाम्लाई नी जन्ती, हामी जन्ती अरु चैं लोकन्ती’ यो गीत कुनै दोहोरी कार्यक्रममा गाईएको लोकगीत होइन न त कुनै दोहोरी साँझमा नै कलाकारहरुले गाएका हुन् । यो गीत आज भएको रमेश प्रसाईँको बिहेमा जन्ती भएर गएकी कल्पना दाहाले गाएकी हुन् ।
धेरैको धेरै थरिको भनाई थियो कि कल्पना रमेश र नन्दाको बिहे जान्छिन् या जाँदिनन् भन्ने । यद्यपी कल्पनालाई भने रमेश र नन्दा दुवैले बिहेको निम्तो भने दिएका थिए । निम्तो पाएपछि बिहेमा को जाँदैन होला र ? त्यसमा पनि कल्पना त दर्शकले रुचाईएकी रमेशकी जोडी हुन् । उनलाई त जानु नै थियो ।
बिहे गरेकै कारण मुख्यमन्त्री राईबिरुद्द अख्तियारमा उजुरी
May 16, 2021 Ab-संसार